Haddii aad qaadanaysay wax badan oo ku baaqay in dhiba telefoonno aan lagaranayn weyna, ama dadka aad lahayd halkii aan hadal la joogo, aad laysu ugu wanaagsan ee uu noqon doono si loo joojiyo tirada ay ka iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad dib u soo ceshano tirada qaarkood in ay tubada qaar ka mid ah waqtigii sababtu wax kasta ka dib. Haddii tani ay tahay waxa aad doonayso in aad qabato, ka dibna aad u timid meel sax ah. Waxaanu ku siin doonaa tallaabooyin gaar ah oo aad raaci karto si aad hore u ogaato tirada hor istaagay, ka kaxeeyo aad madow ama inay dib u Yeedhaan aan laga saaro liiska.
Qaybta 1aad: Sida loo helo Four Numbers Laga iPhones
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah kuwa talaabooyinka aad qaadi karto si aad u hesho lambarada hor istaagay in mobiilka iPhone ama dhib la'aan.
Talaabada 1: Tubada codsiga goobaha aad iPhone ka dibna ku dhuftay icon telefoonka.
Talaabada 2aad: Sida ugu dhakhsaha badan shaashadda soo socda u muuqataa, markaas ka dib waxaad dooran kartaa tab ka hor istaagay. Laga soo bilaabo halkan, waxaad awoodi doontaa in aad aragto liiska lambarada hor istaagay in aad horey u in aad telefoon. Waxaad iyaga edit karaa in lagu daro tiro cusub in ay liiska ama aad ka saari kara tirada hor istaagay haddii aad rabto.
Qeybta 2: Sidee Xagga madow saar Qof
Talaabada 1: Tag goobaha aad iyo icon telefoonka ka jaftaa. Tani waxay aad u guurto doonta shaashada ku xigta.
Talaabada 2: Marka ay jiraan, dooro tab ah hor istaagay. Tani waxay ku tusi doona tirada iyo emails madow ah ee aad taleefan.
Talaabada 3: Waxaad hadda laga yaabaa in ay doortaan button edit ah.
Talaabada 4: From liiska, aad haatan laga yaabaa in ay doortaan mid ka mid ah tirada iyo emails in aad rabto in aad lahaa xakameynta iyo dooro "tubada". Tani waxay ka saari doonaan tirada idiin doortay liiska. Ka dibna waxaad dib u soo wici kartaa lambarka hor istaagay. Xasuuso, marka hore waa in aad tubada tirada hor istaagay ka hor inta wacaya.
Top 5 Apps u Android Phones Helo u Khasaaray iPhone
Guide Full in masax iPhone ah
Sidee si ay u gudbiyaan Verizon Xiriirada inay iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo Helo Lambarka Four on iPhone